अमेरिकी राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता, के होला ट्रम्पको भविष्य ? – Everest Dainik – News from Nepal
अमेरिकी राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता, के होला ट्रम्पको भविष्य ?
वाशिङ्गटन डिसी । नेपालमा महाअभियोगको चर्चा सेलाएको छ । तर अमेरिकामा भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावले विश्वकै ध्यान तानेको छ ।
गत वर्ष सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावको प्रचार अभियानदेखि नै विवादमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टीका एक सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरेका हुन । ट्रम्पले गते २० जनवरीका दिन ४५ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा शपथ लिएका थिए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्धको यो प्रस्ताव क्यालिफोर्नियाबाट डेमोक्र्याटिक सांसद ब्रैड शेरमनले दर्ता गरेका हुन । यो प्रस्तावमा उनले ट्रम्पमाथि खराब आचरण र संघीय जाँचमा बाधा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिकी संसदमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको यो दोश्रो पल्ट हो । यसअघि सन् १९७३ मा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । निक्सनले यही कारण पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
यता व्हाइट हाउसले भने यो प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही बताएको छ । व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता सारा स्याण्डर्सले प्रस्तावलाई हास्याष्पद र राजनीतिक खेलको संज्ञा दिएकी छिन् ।
शेरमनले भने रुस र ट्रम्पको सम्बन्धको चर्चा गर्दै पछिल्लो छानबीनमा बाधा पुगाएर ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा र हितसँग खेलवाड गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्प र रुसको सम्बन्ध तथा राष्ट्रपति चुनावमा रुसको भूमिकाको बारेमा एफबीआई निर्देशक जेम्स कोमीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि ट्रम्पले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए । अहिले यही कुरा ट्रम्पका लागि महंगो साबित भएको छ ।
तर यो प्रस्ताव भने त्यति सजिलै पारित हुने देखिँदैन । अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभ्समा रिपब्लिकनको बहुमत रहेको छ । प्रस्तावलाई अगाडि लैजान यो बहुमतबाट पारित हुनुपर्दछ । ४३५ सदस्यीय सदनमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका २४० र विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टीका १९४ सदस्य रहेका छन् ।
ट्याग्स: donald trump, महाअभियाेग